नयाँ शक्ति र फोरमबीच एकता कति सम्भव ? - Ratopati
केही समयअघि नयाँ शक्ति निर्माणको विषयलाई लिएर चर्चामा रहेका डा. बाबुराम भट्टराई, अहिले नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकताको विषयलाई लिएर चर्चामा छन् । कुनै समय ससंदको ठूलो पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेर देशको कार्यकारी प्रमुखसमेत बनिसकेका भट्टराई अहिले किन आफ्नोभन्दा कम राजनीतिक हैसियत र क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएका नेता उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकीकरण गर्न खोज्दैछन् ? पच्चीस वर्ष माओवादीमा प्रचण्डसँग एउटै कमिटीमा रहेर राजनीतिक यात्रा पारगरेका भट्टराईले एक्कासि माओवादी पार्टी त्यागेसँगै उनले सबैको ध्यान खिच्न भ्याएकै हुन् । पार्टी छाड्नुपर्दाको पीडा उनलाई पक्कै छ । त्यस कारण पनि उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकीकरण गरेर शक्ति आर्जन गरी माओवादी छाड्दाको पीडा कम गराउन चाहान्छन् । शक्तिमा आउनकै लागि पनि उनले, भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेस र त्यही क्षेत्रबाट उदाएको सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकीकरण गर्नु उपयुक्त देखे ।
हुन त फुटमा जति स्वार्थ हुन्छ जुटमा त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी स्वार्थ लुकेको हुन्छ । जुटेर अघि बढे देशको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि उनीहरुको जुट वरदान सावित हुन्छ । तर शक्ति आर्जन र सत्ताकै लागि गरिन लागेको हो भने त्यो स्वयं बाबुराम र उपेन्द्रका लागि मात्र हैन देशका लागि नै घातक बन्छ ।
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच पार्टी एकताको विषयमा ८ वटा राजनीतिक मुद्दा पनि मिल्छ । १. प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह, २. बहुभाषिक नीति, ३. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, ४. पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद, ५. अधिकारसहितको सङ्घीयता, ६. सङ्घीय न्यायपालिका, ७. राज्यका सबै अङ्ग समानुपातिक, ८. राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता । यी मुद्दाहरु हेर्दा पार्टी एकीकरण हुने आधार त छ । तर शक्ति बाँडफाँडलगायत अन्य भित्री पाटो एकीकरणका लागि बाधक बन्न सक्छ । पार्टी एकीकरण भयो भने पनि उनीहरु एकढिक्का भएर अघि बढ्छन् भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार भेटिँदैन । किनभने अहिलेसम्म नेपाली राजनीति सत्ता र स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
दुई पार्टीका अहिलेका केही राजनीतिक मुद्दा माथि विश्लेषण गर्ने हो भने नयाँ शक्ति र फोरमबीचको एकताले देशलाई केही हदसम्म निकास दिन पक्कै सहयोग हुन्छ । अधिकांश राजनीतिक मुद्दाहरु मिलेका कारण पनि उनीहरुको एकता आवश्यक छ । हुन त नेपालका राजनीतिक दलहरु सिद्धान्तलाई भन्दा सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्छन् । अहिलेसम्म जनताले गरेको अनुभव त्यही हो । तर पनि भट्टराईले पहाडी मूलको नेतृत्व र यादवले तराईवासीको मन जितेर आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत उकास्न दुवैले चाहेका हुन सक्छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई आफ्नो मुद्दा लागू गराउन पनि सजिलो हुन्छ ।
तत्कालका लागि दुई पार्टीले उठाएका केही राजनीतिक मुद्दा मिल्दैमा फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भइहाल्छ भन्ने गतिलो आधार छैन । अर्कोतर्फ अहिले नै पार्टी एकीकरण भइहाल्ने छाँटकाँट छैन । उपेन्द्र यादवले दुई पार्टीको कार्यगत एकता मात्र हुन लागेको बताइरहँदा नयाँ शक्तिका केही नेता भने पार्टी एकीकरण भइहाल्ने जसरी हतारोमा अभिव्यक्ति दिँदैछन् । विभिन्न मिडियामा पनि पार्टी एकीकरणकै चर्चा छ । ‘हावा नचलि पात हल्लिदैन ।’ दुई नेताबीच एकीकरणको विषयमा केही सल्लाह भएर नै एकीकरणको विषयले चर्चा पाएको हुनुपर्छ । मुख्य कुरो शक्ति बाँडफाड नै हो । त्यहाँ कुरो नमिल्न सक्छ । भट्टराई र यादब बीच मात्र हैन बरियताका क्रमको सिनियर रहने भनेर मधेसी मूलका नेताहरुबीच समेत विवाद आउन सक्छ । माओवादीमा रहँदा पटक पटक पदको बार्गेनिङ गरेका भनिएका भट्टराई, उपेन्द्रको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरण गरेर दोस्रो बरियतामा रहन चाहँदैनन् । उता आफूले चलाउँदै आएको पार्टीको नेतृत्व यादवले सहजै भट्टराईलाई सुम्पिएर आफू दोस्रो बरियतामा नबस्न सक्छन् । यसअघि एमाले उपाध्यक्ष रहेका र लामो सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका नेता अशोक राई पनि पार्टी एकीकरण मार्फत त्यही पार्टीसँग मिल्न आएका छन् । अर्कोतर्फ पार्टी एकताका लागि दुवै पार्टीका अन्य नेताबीच पदीय बाँडफाँड समस्या बन्छ । नयाँ शक्तिमा रहेका मधेसी मूलका नेताहरू रामचन्द्र झा, महेन्द्र पासवान, रामकुमार शर्मा, रामरिझन यादवले उपेन्द्र यादवलाई सिनियर नेता नमान्न सक्छन् ।
बाह्य शक्ति राष्ट्रसँगको निकटताबाट हेर्ने हो भने भट्टराईलाई भारत र यादवलाई चीन निकट मानिन्छ । भट्टराईले भारत परस्तको आरोप जति खेप्नुपरेको छ यादवले त्यति छैन । यी दुवै नेताको राजनीतिक बुझाइमा भने समानता छ । अधिकांश राजनीतिक मुद्दा पनि मिल्छ । तर पार्टीभित्र गम्भीर छलफल नै नचलाई एकताको चर्चा चलेको कारण यी दुई पार्टीबीच तत्काल एकता हुनेमा भने शङ्का छ ।